Bogga ugu weyn 10ka Alaabta Dijital ah ee ugu Wanaagsan ee La Iibinayo 2022
Waxaad iibin kartaa alaabta dhijitaalka ah oo waxaad samayn kartaa dakhli la taaban karo haddii aad ogtahay waxaad samaynayso. Dadku ma gartaan sida ay u fududahay in la iibiyo alaabta dhijitaalka ah sababtoo ah waxay ku luminayaan suuq-geynta suuq-geynta ee dadka caanka ah ee ay taageerto Youtube.
Taa bedelkeeda, waa inaad diirada saartaa abuurista waxyaabo waxtar leh oo tayo sare leh. Mar alla markii alaabtaadu diyaar noqoto, waxaad isticmaali kartaa kanaalada taraafikadda sida kooxaha Facebook, fiidiyowyada Youtube-ka, ama qoraallada blog-ga si aad u hesho dadka xiiseeya.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in macaamiishu aysan ahayn doqon oo aan si fudud loogu khiyaanayn inay iibsadaan wax tayo hooseeya. Haddii alaabtaadu ay si liidato u dhismay ama haddii aad isticmaalayso farsamooyin qancin ah oo aan daacad ahayn si aad u iibiso, macaamiishaadu waxay u badan tahay inay ku faraxsanayn iibsigooda oo aanay mar dambe wax kaa iibsan.
Waxay u sheegi doonaan saaxiibadooda inay sidoo kale kaa fogaadaan.
Waa maxay badeeco?
Waa maxay alaabta dhijitaalka ah?
Maxay Alaabaha Dijital ah uga door bidaan Alaabaha Jirka?
Sidee loo Suuqeeyaa Alaabta Dijital ah?
10ka alaab ee ugu wanaagsan dhijitaalka ah ee la iibiyo
1. Cuntooyinka cuntada
2. Casharrada iyo Tilmaamaha
7. Qaybaha Shabakadda
8. Barnaamijyada Software-ka
10. Xirmooyinka Tababarka
Su'aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan 10ka alaabada dhijitaalka ah ee ugu wanaagsan ee la iibiyo
Waa maxay tusaale ahaan Alaabta Dijital ah?
Waa maxay alaabooyinka dhijitaalka ah ee hadda loo baahan yahay?
Waa maxay dib u iibinta dhijitaalka ah?
Alaabtu waa shay aad iibin karto. Waxay noqon kartaa qayb wax soo saar ah, qalab elektaroonik ah, ama sariir raaxo leh. Tani waxay ahayd run ka hor inta uusan internetka wax walba ka dhigin mid hufan. Maanta, ganacsatada intooda badani waxay ganacsi ka bilaabaan khadka iyo alaabada dhijitaalka ah waa boqor.
Badeecada dhijitaalka ah ayaa si fudud u ah badeecad lagu keeno qaab dhijitaal ah. Si kastaba ha ahaatee, qeexidani maahan inay sawir buuxa ka bixiso waxa dhabta ah ee badeecada dhijitaalka ah.
Tusaale ahaan, marka aad macluumaad faa'iido leh ka hesho mareegaha oo aadan waxba ka bixin, waxay noqotaa badeecad dhijitaal ah.
Ka dib oo dhan, badeecada dhijitaalka ah ayaa si dabiici ah u ah badeecad qiimo siisa macaamilka.
Arag sidoo kale: Sida Loo Qoro Dib-u-Eegista Badeecadda Sannadka 2022-ka: Tilmaan-Tallaabo Tallaabo-fudud ah
Dadku waxay la yaabi karaan sababta aad u soo bandhigi lahayd alaabada dhijitaalka ah halkii aad ka abuuri lahayd alaabtaada jireed. Ka dib oo dhan, alaabooyinka jidhku waxay xukumayeen ganacsiga boqollaal kun oo sano.
Alaabooyinka dhijitaalka ah ayaa faa'iidooyin badan ku leh dhiggooda jirka, gaar ahaan ganacsadaha iibiya. Tani macnaheedu maaha inaad dharbaaxi kartaan badeecad kasta oo dhijitaal ah oo aad dhalin kartaan hanti.
Alaabta ayaa wali u baahan inay bixiso qiimo cajiib ah haddii aad rabto in macaamiishaadu soo noqdaan. Waxaad ku kaydin kartaa wakhtiga iyo lacagta aad ku kaydsato abuurista alaabada dhijitaalka ah si aad alaab cusub uga dhigto macaamiishaada.
Ku bixi lacagtaada iyo wakhtigaaga suuq-gaynta, xayaysiinta, summaynta, iyo kuwa kale
hawlaha la xidhiidha nuxurka haddii aad rabto inaad sii korodho iibkaaga.
Faa'iidooyinka qarsoon waa:
Ma jiro alaab la hayo.
Uma baahnid kaydka jirka ee alaabta.
Bixinta waxay ku dhowdahay isla markiiba iibka kadib.
Kharash aad u yar marka loo eego ururinta alaabta jirka.
XIDHIIDHKA: 10-ka Luul ee ugu Qaalisan Adduunka
Suuqgeynta alaabada dhijitaalka ah aad ugama duwana kuwa jir ahaan suuqgeyneed. Waa inaad qeexdaa dhagaystayaashaada, ku beegto farriimaha summada ku habboon, oo aad xadhkaha isgaadhsiinta furnaadaan.
Farqiga ugu weyni waa inaad u baahan tahay inaad sharaxdo baahida badeecada dhijitaalka ah - wax aadan sameyn karin markaad iibineyso saabuunta dharka ama saabuunta.
Arag sidoo kale: 15 Akhristayaasha ugu fiican ebook ee 2022 | Hel Maalin walba Waxsoosaar leh
Buugaagta karinta waxay ka mid yihiin alaabada dhijitaalka ah ee sida aadka ah loo iibiyo, markaa shaki kuma jiro inaad ku abuuri karto badeecad hareerahooda. Buugaagta karinta waa hab fiican oo lagu sahamiyo cunnada adduunka oo dhan, iyo macaamiil badan ayaa jecel inay makhaayadda ka dalbadaan cuntooyinka ay jecel yihiin.
Hubaal, waxaad ka heli kartaa cuntooyin bilaash ah online, laakiin dadku waxay u badan tahay inay bixiyaan buugag-cunto-karin tayo sare leh marka cuntooyinkan ay soo bandhigaan ilo sumcad leh. Haddii aadan haysan khibrad makhaayad ama cunto karinta, ha werwerin - waxa kaliya ee ay qaadanayso waa cilmi-baaris aasaasi ah, tijaabo iyo shaqo adag.
Waxa kale oo aad ka fikiri kartaa cusboonaysiinta buug-cunto-karis oo jira ama beddelkii aad samayn lahayd badeeco dhijitaal ah. Waxaad ku dallaci kartaa isticmaalayaasha bishiiba ama waxaad isku dari kartaa wax iibsi hal mar ah, sida abka ama adeegga rukunka ee u keena cuntooyinka qalabkooda.
Dadku had iyo jeer waxay u baahan yihiin cuntooyin cusub, markaa mar walba waxaa jiri doona xiiso nooc kasta oo cunto ah oo aad abuurto.
Waxaan ku noolnahay dhaqan DIY ah. Abuurayaasha iyo kuwa hiwaayadda u leh waxay rabaan inay bartaan sida wax loo sameeyo.
Tani waxay ku siinaysaa fursad aad ku hesho lacag si aad u siiso si qoto dheer, qalab waxbarasho oo tayo sare leh dadka aan haddii kale aan dan ka lahayn inay bixiyaan.
Waxa ugu weyn ee ku saabsan alaabada dhijitaalka ah ayaa ah inay noqon karaan kuwo waxbarasho dabiici ah. Waxaad samayn kartaa hage ama casharro ku saabsan sida wax loo sameeyo, ama waxaad duubi kartaa casharrada fiidyowga ah.
Samee muusig adiga kuu gaar ah oo ku iibi shuruudahaaga. Waxaad duubi kartaa muusiggaaga, ka dib waxaad ka dhigi kartaa iib meel kasta oo aad rabto. Xorriyadda aad ku sahamiso hibadaada muusiga iyo inaad xajisato xakamaynta hal-abuurka leh ee wax soo saarkaaga waxay noqon kartaa mid xor ah hal-abuur ahaan.
Intaa waxaa dheer, uma baahnid inaad wax ka qabato cajaladda cas ee xafiiska. beddelkeeda, waxaad si gaar ah diiradda u saari kartaa muusiggaaga.
Maadaama aadan hadda u baahnayn inaad soo saarto badeecad jireed, sida CD-ga, waxaad ka dhigi kartaa muusiggaaga mid loo heli karo oo keliya sida faylalka dhijitaalka ah.
Dadku waxay markaa ka dhageysan karaan ciyaartoyga MP3, kombayutaradahooda, iyo aaladaha kale.
Arag sidoo kale: Sida Loo Noqdo Iibiyaha Alaabta & Ka Faa'iideyso 2022 | Tilmaan Buuxo
Waxaad qori kartaa buugga e-buugga mowduuc kasta oo aad jeceshahay. Ganacsade ahaan, adiga ayaa go'aaminaya dhererka iyo nuxurka buugga e-buugga. Waxaad naftaada ku daabaci kartaa amazon ama waxaad ka raadsan kartaa daabace dhaqameed.
XIDHIIDHKA: 10 Keega Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Haddii aad hore u leedahay macaamiil iibsaday koorasyadaada khadka tooska ah, waxaad ku bari kartaa e-buuggaaga. Waxaad haysataa dhuumo ku dhex jira oo macaamiisha iman kara.
Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sidoo kale abuura taxane e-book ah oo u iibiya si gaar ah iyo xidhmo, taas oo siinaysa fursad ay ku kiciyaan. Waxa kale oo aad ku iibin kartaa koorsooyinkaaga khadka tooska ah.
Koorasyadu waa habka ugu wanaagsan ee lagu soo gudbin karo waxyaabo tayo sare leh, lagu dhiso maamulka iyo iibinta alaabada dhijitaalka ah. Koorsada khadka tooska ah waa sida koorsada fasalka dhexdiisa marka laga reebo inaad internetka wax ku dhigto.
Macaamiishu waxay wax ku bartaan qaybo gaar ah iyo waqtigooda.
Waxaad koorasyo ​​ku abuuri kartaa dhibco iyo cabbiro kala duwan, waxaadna abuuri kartaa alaab kale oo dhijitaal ah hadhow.
Malaayiin dad ah ayaa daabaca alaabta dhijitaalka ah maalin kasta. Waxaa jira baahi joogto ah oo loogu talagalay sawir qaade gaar ah si loogu iibiyo saami ahaan. Waxaad lacag ku samayn kartaa adigoo ku iibinaya sawiradaada Amazon iyo suuqgeynta xiriirka la leh YouTube.
Haddii aad rabto in aad dhisto bulshadaada oo aad si toos ah u iibiso, waxaad isticmaali kartaa Instagram ama waxaad abuuri kartaa blog. Habka ugu wanaagsan ee lagu iibiyo sawiradaada ama sawiradaada waa iyada oo loo marayo goobaha sawirada saamiyada, sida Fotalia iyo iStockphoto.
Goobahani waxay kuu oggolaanayaan inaad sii haysato dhammaan xuquuqda sawiradaada, taas oo ilaalinaysa hantida maskaxdaada.
Baahida loo qabo walxaha mareegaha ayaa aad ugu weyn dhaqaalaha maanta. Tusaale ahaan, dad badan ayaa kasbada lix ama todobo tirooyin iyagoo iibiya mawduucyada WordPress. Qaababka naqshadeynta shabakadda ee Premium waxay abuurtaa dakhli aan fiicneyn sababtoo ah waa inaad hal mar abuurtaa mawduuca.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad cusboonaysiiso wakhti ka waqti sababtoo ah isbeddelada nidaamka maaraynta macluumaadka (CMS), laakiin taasi aad ayay uga yar tahay shaqada marka loo eego abuurista badeecad cusub oo xoq ah.
Intaa waxaa dheer, waxaad abuuri kartaa mawduucyo shabakadeed oo badan intaad rabto. Inta badan oo aad bixiso, macaamiil badan ayaa suurtogal ah inaad beddesho.
Arag sidoo kale: Badeecad-Dhexdhexaad ah iyo Macaamiil-Qarshe: Qaabkee u Wanaagsan Ganacsigayga?
Si aad lacag ugu samayso alaabta dhijitaalka ah si aad u iibiso, isku day inaad abuurto qayb cusub oo software ah.
Dadku waxay jecel yihiin software-ka sababtoo ah waxay daawaysaa dhibcahooda xanuunka. Laga soo bilaabo wax soo saarka iyo aragtida shabakada ilaa naqshadaynta iyo sawirida, wax badan barnaamijyada softiweerka waxay u istaageen imtixaan waqti. Maalmahan, barnaamijyo badan oo software ah ayaa loo iibiyaa rukhsad ahaan beddelkii shatiga.
Si kale haddii loo dhigo, macaamiishaadu waxay bixiyaan kharash bille ah si ay u isticmaalaan software-kaaga. Ilaa inta ay bixinayaan, waxay sii haysanayaan gelitaanka.
Siyaabo badan, qaabka isdiiwaangelinta ayaa bixiya dakhli ka wanaagsan kan shatiga. Haddii aad iibiso shatiga, waxa lagu siinayaa hal mar kaliya. Macmiilku waligiis waa inuu ku siiyo dime kale.
Xusuusnow inta aad ka heli jirtay ciyaaraha kombayutarka markaad caruur ahayd? Hagaag, waxaa soo baxday in ciyaarahaas isku midka ah ay weli caan ku yihiin aaladaha mobilada.
XIDHIIDHKA: 10ka Apps ee ugu Fiican ee Bandhiga Muusigga
Qaarkood waxay leeyihiin astaamo isku mid ah iyo gameplay laakiin waxaa laga heli karaa aaladaha mobilada Google Play ama Apple's App Store. Qaar ka mid ah waxay ka qaadaan lacag halka kuwa kalena bilaash lagu heli karo.
Barnaamijyadan waxay u badan tahay inay ku jiraan dukaanka dhijitaalka ah ee isku dhafan halkaas oo dadku ka iibsan karaan waxyaabo dheeraad ah sida nolol dheeraad ah, hub, kor u qaadis, khariidado iyo wixii la mid ah. Uma baahnid inaad adigu noqoto horumariye software si aad u horumariso oo aad u daabacdo app.
Ganacsato badan ayaa door bida inay shaqaaleysiinayaan horumariyayaal madax-bannaan oo ku saleysan mashruuc-mashruuc.
Haddii kale, haddii aad rabto in aad ku qoyso suulashaada horumarinta app, waxaa jira barnaamijyo badan oo software ah oo la heli karo kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad si fudud oo raqiis ah u abuurto barnaamijyo fudud oo shaqeynaya.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in abka fudud oo ay ku jiraan astaamo yar ay ku adkaan doonto in ay ka dhex helaan macaamiisha caqliga badan.
Waxaad u isticmaali kartaa alaabtaada dhijitaalka ah si aad u kabiso dakhligaaga oo aad u abuurto xidhiidh hoose oo dheeraad ah macaamiishaada. Tusaale ahaan, aan nidhaahno waxaad dadka baraysaa sidii ay u noqon lahaayeen hoggaamiyeyaal wanaagsan.
Waxaad abuurtay koorsooyin onlayn ah, e-buugaag, iyo alaabada kale ee dhijitaalka ah, laakiin qaar badan oo macaamiishaada ah ayaa jeclaan lahaa in aad tababarto. Si aad uga jawaabto codsigooda, waxaad abuurtaa xirmo tababar.
$150, waxaad kula qaadan doontaa 30 daqiiqo taleefoon iyaga todobaadkiiba hal mar muddo hal bil ah. Dabcan, waxaad ku hagaajin lahayd tirooyinka sidaad jeceshahay.
Arag sidoo kale: Guddiyada Macaamiisha Mareykanka: Fadeexad Baadhis Badeeco Cusub?
Tusaalooyinka waa maqaallada Wikipedia; warbaahinta dhijitaalka ah, sida buugaagta elektaroonigga ah, muusig la soo dajin karo, raadiyaha internet-ka, telefiishanka intarneedka iyo war-baahinta; xarfaha, calaamadaha, sawirada iyo sawirada; is-diiwaangelinta dhijitaalka ah; xayaysiisyada khadka tooska ah (sida uu u iibsaday xayaysiiyuhu); kuuboonnada internetka; tigidhada elektarooniga ah; dukumeenti si elektaroonik ah loola dhaqmay
U diyaargarow wax soo saarka dhijitaalka ah ee qaar ka mid ah, si aad adiguba u bilaabi karto abuurista iyo la wadaagista adduunka!
eBooks Ebook-yadu waxay ahaayeen oo sii wadaan inay noqdaan mid ka mid ah alaabta dhijitaalka ah ee ugu caansan abuurayaasha iyo macaamiisha labadaba.
Maqal iyo muusig
Garaafyada & farshaxanka dhijitaalka ah.
Maxaa dib u iibinaya marka ay timaado adeegyada dhijitaalka ah? Dib-u-iibintu waa habka aad ku iibsanayso adeegga dhijitaalka ah si aad uga iibiso macaamiishaada si aad faa'iido u hesho.
Waxaad ka baratay alaabada dhijitaalka ah ee ugu wanaagsan uguna caansan ee lagu iibiyo onlayn. Ma jiraan wax kaa joojinaya inaad abuurto oo aad iibiso wax gaar ah. Maanta bilow!
Soodejisyo fudud oo dhijitaal ah
Guddiyada Macaamiisha Mareykanka: Fadeexad Baadhis Badeeco Cusub?
15 Siyaabood oo Looga Helo Muunadaha Badeecadaha Jumladaha Bilaashka ah Soo -saare 2022
Waa maxay Caymiska Khasaaraha? Daboolista ugu Fiican 2022
Sida Loo Helo Tigidhada Shineemada Jaban Ama Bilaashka Ah | 2022
Tom wuxuu mar ii sheegay wada sheekeysi in mid ka mid ah waxyaabaha uu jecel yahay uu booqanayo shineemada si uu u arko…
Ma jeclaan lahayd inaad iibiso qaar ka mid ah alaabtaada, sida dharka, qalabka ama dharka kale? Kadib, mid…
10ka Bedel ee ugu Wanaagsan Instagram | 2022
Marka ay timaado warbaahinta bulshada, hal madal oo bulsho ayaa had iyo jeer taagan. Goobtani waa Instagram. Si ka duwan kuwa kale…
Ujeedada qoraalkan ku saabsan soo -jeedinta vs letgo waa inuu kaa caawiyo macluumaadka saxda ah ee…
Xagee Laga Iibsadaa Ripple (XRP) USA | 2022
Awoodda Ripple ee dib -u -habaynta nidaamka maaliyadeed mustaqbalka lama soo koobi karo. Horeba, XRP waxay soo bandhigaysaa…